Hiphop အဆိုတော် ရသ ကုသလပရဟိတအသင်းအား ကဗျာဆရာ သစ္စာနီနှင့် တွဲဖက်၍ ထူထောင်မည် | အိုးဘို
Hiphop အဆိုတော် ရသ ကုသလပရဟိတအသင်းအား ကဗျာဆရာ သစ္စာနီနှင့် တွဲဖက်၍ ထူထောင်မည်
Posted: July 17, 2011 in News
Tags: ကဗျာဆရာ သစ္စာနီ, ကုသလပရဟိတအသင်း, Hiphop အဆိုတော် ရသ
Hiphop အဆိုတော် ရသ မှ ကုသလပရဟိတအသင်း အား ကဗျာဆရာ သစ္စာနီနှင့်တွဲဖက်၍ထူထောင် မည် ဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က TheMessage ဂျာနယ်သို့တရားဝင်ပြောကြားသည်။
“စုစုပေါင်းကျွန်တော် အပါအ၀င် ၁၃ယောက်နှင့် စဖွဲ့ပါမယ် ။ တရားဝင်လူမှုရေးအသင်း တည်ထောင်ခွင့်ကို နှစ်ပတ်အတွင်းလျှောက်ထားမှာပါ။ အသင်းစဖွဲ့မိတာကတော့ ကဗျာဆရာ သစ္စာနီနဲ့ လူငယ်အဖွဲ့က ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းမိသွားတာပါ ။ NNDP ပါတီ သင်္ဃကျွန်းမှာကတော့ ကျွန်တော့်ကြောင့် လုပ်အားလစ်ဟာစရာမရှိပါဘူး. အားလုံးကအတွေ့အကြုံရော ၊ လုပ်အားပါရှိပါတယ်” ဟု Hiphop အဆိုတော် ရသမှပြောသည်။
ကုသလ ပရဟိတအသင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး၊ခောတ်မီ ပညာရေး၊စာပေယဉ်ကျေးမှု အနုပညာနှင့် ထေရ၀ါဒ သာသနာအတွက် အလုပ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
အဆိုပါ ကုသလ ပရဟိတအသင်းသည် အခြေခံလူတန်းစားများ အပေါ် လူမှုရေး၊ပညာရေးကိစ္စရပ် များကို အသင်းအဖွဲ့ ရှိ အမှုဆောင်၅ယောက်မှ ပရောဂျက်ဖြင့် အတွင်းရေးမှူးအား လွှဲပြောင်း၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွတ်မှုစံနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါအဖွဲ့တွင် လူငယ်ကဗျာဆရာ အနုပညာသည်များပါဝင်ပြီး ဥက္ကဌ ရာထူးကို အဆိုတော်ရသမှတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
“ အခုလို ပရဟိတလုပ်တာ အချိန်ပေးနိုင်လို့ လုပ်တာပါ၊ အခုကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ်မှာ လူငယ်တာဝန်ခံအဖြစ် အဆိုတော် ရသမှတာဝန်ယူထားပါတယ် ။ ပါတီက တရားဝင်မှတ်ပုံတင် မကျသေးတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မရှိသေးပါဘူး ” ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်တာဝန်ရှိသူ ဦးမျိုးထွန်းက ပြောကြားသုံးသပ်သည် ။
*The Messanger ဂျာနယ်မှပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်
အမတ်လောင်းကိုကြီးရသ လူငယ်တွေရဲ့စံပြအဖြစ်တည်ရှိပါစေဗျာ… လေးစားလျှက်
Poppy Mandalay says:
မိုက်ပါ့ ကိုရသ ကြီး …. သတိထား … သူတို့ အမြင်ကပ်ရင် ကျောင်းထဲ ပို့တတ်တယ် … 😛
အားကျတယ်ဗျာ… လုပ်ချင်တာကို လုပ်တယ်၊ အကို. ဘ၀ လေးကို အားကျတယ်ဗျာ ..
နဂိုတည်းကဟစ်ဟော့ပ်ဆိုတာကိုကြိုက်ပြီးသား အခုတော့ပိုပြီးတော့လေးစားသွားပြီ လူငယ်တွေရဲ့ စံပြပဲ အစ်ကိုတို့ အဖွဲ့ ထောင်ပြီးသွားရင် အဖွဲ့ နဲ့ ပတ်သတ်တာလေးတွေ ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြစေချင်ပါတယ် ဖေ့စ်ဘုတ်လိုနေရာမျိုးမှာပေါ့ လူတော်တော်များများသိနိုင်တယ်လေ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေလည်းအဲ့လို လူမှူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ် တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ချင်ပါတယ် အခုလိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြရှိတော့ပိုပြီးကောင်းသွားတာပါ့ အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲ ဘယ်လိုအကန့်ကပါဝင်နိုင်မလဲ အဲ့လိုမျိုလေးတွေပေါ့ ဆက်လက်ပြီးထုတ်ပြန်စေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်အကြံပေးတာပါဗျာ
aye zaw win says:
ကိုရသ ဆောက်ရမ်းကြိုက်တယ် အားပေးနေမယ်
haythar thar says:
although i don’t like ur music, i am pleased and like ur political status. now u r my youth admired person.
Music Tips: 9th Wonder